Imveliso kaReishi, isicatshulwa seMushroom, iSongezelelo seMushroom seCapsule-Wuling
Eyasungulwa ngo-2003, i-Wuling yinkampani ye-biotech ejolise kwimveliso kunye nokulungiswa kwamakhowa amayeza kunye nezongezelelo zokutya. Iqale kwaye yaphuhliswa e-China, ngoku sinabile saya e-Canada kwaye sibonelela ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo ze-mushroom.
Isiseko sethu sokutyala sendalo sisezantsi kweNtaba yeWuyi, egubungela indawo emalunga ne-800 mu. Intaba ye-Wuyi yenye yezona ndawo zigcina indalo eTshayina, apho umoya ococekileyo ucocekileyo kwaye ungenalo ungcoliseko olungelulo kwaye ulunge kakhulu ekukhuleni kwamakhowa amayeza.
R & D kunye nolawulo lomgangatho
Ngawo onke amanqaku kwimveliso sibeka iliso kwimveliso yethu kumanqanaba ezinto ezifanelekileyo ezisebenzayo ukuze ube nakho ukungaguquguquki kunye nokuphakama kwesiseko sezinto ezinamandla okanye imveliso egqityiweyo kuthi. Siqinisekisiwe nge-ISO 22000 kwaye sinokubonelela ngeengxelo zovavanyo lwe-SGS njengoko kufuneka. Kananjalo, umgangatho wethu uvela kukhetho olunenkcukacha kunye nemigangatho engqongqo yezinto zokwenza izinto esizisebenzisayo kunye neendlela ezilungileyo zokulima.
Ukusukela ngo-2003 sikhule kubathengi bethu kwihlabathi liphela kwaye sithumela rhoqo kumazwe angaphezu kwama-40 ahlukeneyo kwihlabathi liphela. Ngokubhekisele ekuthumeleni senza konke okusemandleni ethu ukuthumela ngenqanawa ngexesha kwaye sineqela elikhulu lokulawula oku. Sineqela labasebenzi abangaphezu kwama-75 kwi-R & D, ukuthengisa kunye nemveliso.
Amayeza Amakhowa Powder
Sigqitha iintlobo ezingama-20 zezicatshulwa ezikumgangatho ophezulu zamakhowa.
Zonke izithako zivela kwi-100% yemveliso yeziqhamo yamakhowa eqinisekisiweyo.
I-Beta-Glucan isukela kwi-10% -98%.
IiPolysaccharides eziqala kwi-10% -98%.
Uvavanyo lweLebhu oluvunyiweyo oluPhezulu lweMigangatho yensimbi.
Akukho kugcwalisa okanye iDextrin.
Ngokwengxelo ye-Materia Medica, i-ganoderma lucidum inendalo ethe tyaba, incasa ekrakra, engekho ...
Ukucaciswa kwegama leMveliso yeNgonyama yeNdawo yeNgonyama yokuKhusela iiMune-Boosters Ilizwe elivela eChina ...
I-Cordyceps, eyaziwa ngokuba yiCordyceps militaris, yinkimbinkimbi yefungus Cordyceps miltaris parasitic kwi t ...
Organic Ganoderma Spore njengezingxobo zeoyile
Ikwabizwa ngokuba yiDanzhi, iyakrakra kwaye ayiyityhefu. Iphatha iqhina le-thoracic kunye neQi. IGanoderma luc ...
Organic Ganoderma Spore njengezingxobo Powder
100% Organic Ganoderma Caphula njengezingxobo
Amacwecwe eMushroom yeKhowa
Iifomula ezisebenzayo ezingaphezu kwe-100 ngabathengi banelisekile.
Umenzi oqinisekisiweyo we-GMP ovunyiweyo.
I-FDA, i-USDA / i-EU ICANDELO, i-HACCP, i-ISO22000, i-KOSHER, iziQinisekiso ze-HALAL.
Ulawulo loMgangatho ukusuka ekuqaleni kuye esiphelweni.
Iimveliso ezenziwe ngokwezifiso ukusuka kwifomula ukuya kwibhotile.
Iziselo zamakhowa kunye neti
Iziselo ezinempumelelo ezisebenzayo ngamakhowa amayeza awongeziweyo.
Umgubo oqinisekisiweyo wesithako esidumileyo.
Ikofu, iti, umgubo weziqhamo, iturmeric powder, Macha powder, Probiotic, Protein Powder.
Ngaphezulu kwe-100 ifomula eyonelisekileyo kunye nokunambitheka.
Elungiselelweyo ukusuka isongo kwibhokisi yangaphandle.
Inkonzo enye yokumisa, ilungele ukuthengiswa.
Isicelo sokutya iMarike ephambili ● Canada ● America ● South America ● Australia ● Korea ● Japan ● Rus ...
Amakhowa eReishi aneBeta Glucans (polysaccharides), ii-carbohydrate ezinde ezomnye ...
IReishi Cafe Latte
Imathiriyeli ekrwada: Kuxutywe ipremiyamu yaseMalaysia yeArabica yangoku kunye nomgubo obalaseleyo ...
I-Organic Ganoderma iqokobhe-eyaphukileyo Spore Powder cap ...
Uchungechunge lweJuncao Red Reishi
Itekhnoloji yokulima iJuncao ijolise ekukhuseleni imeko-bume ekusikeni isigodo ukuze ikhule amakhowa.
Ngokwendalo sikhula kwingca ethile yasendle.
Umxholo ophezulu we-polysaccharides kunye ne-triterpene eRed Reishi.
Ifama yokuqala emhlabeni ukukhula iJuncao Red Reishi.
oko sikwaziyo ngamakhowa amayeza?
I-Gmp kunye neAmp; fda eqinisekisiweyo.
Yenziwe i-100% isiko lophawu lwakho.
Umgca wokutsala olungileyo.
Sinabaqulunqi abaziingcali kunye nabayili bokupakisha ukuba benze ngokwezifiso uphawu lwakho!
Umhlaza ngokuchasene nomhlaza, la makhowa amayeza ayasebenza!
Kwimeko yanamhlanje ephezulu yomhlaza, kungxamisekile ukuthintela kunye nokulwa umhlaza! Uphando lwezonyango lubonakalisile ukuba ubuncinci i-35% yomhlaza inxulumene kakhulu nokutya, ke ukutya okuchanekileyo kubaluleke kakhulu kuthintelo lomhlaza. Amakhowa anuka kamnandi bubuncwane ekutyeni. Abantu bamandulo ...
Ukuthetha nge-ganoderma, kufuneka ukuba siyivile.I-Ganoderma lucidum, enye yamayeza asithoba, sele isetyenzisiwe ngaphezulu kweminyaka engama-6 800 e-China. Imisebenzi yayo efana "nokuqinisa umzimba", "ukungena kumalungu amahlanu e-zang", "ukuthomalalisa umoya", "ukukhulula ...
Ukufumana inkxaso-mali esidlangalaleni kusinika ithuba elikhulu lokuqhubeka nokubonelela ngomxholo ophezulu. Nceda usixhase!
Iiadaptogens zitshayela umhlaba wezempilo, zikhula ngokukhawuleza njengenye yeendlela ezintsha eziqinisekisiweyo zokunyusa impilo yakho. Ikwabizwa ngokuba yiGanoderma lucidum, i-reishi mushroom ixhaphake kakhulu kumayeza aseMpuma kwaye ibisetyenziswa "kunyango lwesintu ...
Izibonelelo ezi-7 ezinkulu ze-ganoderma ezityiwayo zexesha elide
Yintoni iReishi Mushroom? Amakhowa eReishi aphakathi kwamakhowa aliqela asetyenzisiweyo asetyenziswe kangangamakhulu eminyaka, ngakumbi kumazwe aseAsia, kunyango losulelo. Kutshanje, ziye zasetyenziswa kunyango lwezifo zamaphaphu kunye ne-cance ...